N'ụlọ ọzụzụ ụlọ - nri Makia
Ụzọ Makia: Gịnị bụ ọzụzụ dị elu na ọzụzụ ketogenic ogologo oge?
Ụzọ Makia bụ ngwa mmemme e mepụtara na Finland, bụ nke ghọwo ihe a ma ama na obodo ya n'afọ ole na ole. Usoro a na-enye usoro ntụrụndụ siri ike nke a pụrụ ịrụ n'ụlọ ma ọ bụ n'ụlọ mgbatị. Ihe isi ike nke omume ahụ na-abawanye na-akpaghị aka mgbe ị na-azụ ọzụzụ. Ụzọ Makia na-agụnyekwa nri ebe ọtụtụ puku ndị ọrụ natara ezigbo ịdị arọ ma mee ka àgwà ha na-eri mma.
Usoro ihe omuma nke usoro nri Makia
Ana m eji ndụ m niile eme ihe, ma mgbe m dị ihe dị ka afọ 35-40, ahụ m malitere ịba abụba. Mgbanwe ahụ mere n'enweghị ihe ọ bụla. Foto dị na ya n'oge a mara mma nke ụsọ osimiri na-emeghe anya m.
Ana m echegbu onwe m nke ukwuu, ma mgbe m hụrụ foto ahụ, agara m na ọnụ ọgụgụ ma hụ na o juru m anya na ibu m abawanyewo elu. M na-eche ihe nwere ike ịbụ ihe ọjọọ.
Eri m abụba abụba, yogọt dị ala, mmiri ara ehi nke ọma, ihe ọṅụṅụ dị nro na-esi ísì ụtọ, abụba na-abụchaghị abụba, akwụkwọ nri na-eri nri na-abụchaghị abụba, ọtụtụ protein ma na-adabere anụ. Echere m na m riri ahụike, dịka ntụziaka zuru ezu. Ihe na-ezighi ezi, na-ezighi ezi.
Ana m atụle ụkpụrụ cholesterol m, ha adighikwa mma. Cholesterol ọjọọ ahụ dị oke elu ma dị oke ala. Mgbe m rịọrọ maka ndụmọdụ, m nwetara ntụziaka maka otu esi belata abụba site na nri.
Kedu ka m ga - esi mee ka ndị na - aṅụ abụba ghara iri nri m? Tụkwasị na nke ahụ, onye nyere m ndụmọdụ ahụ bụ nnọọ ibu karịa m. Enwere nsogbu ahụ.
M rụziri ọrụ n'otu ebe ebe ihe ọmụma gbasara ahụike dị mkpa. Enwere m ezi mmụta na ihe ọmụma bụ isi iji dozie nsogbu ahụ. Amalitere m ịchọpụta ihe mgbochi nke ahụ. Achọpụtara m mgbe ahụ na-eji carbohydrates na mgbe ọ na-agba abụba. Aghọtara m ngwa ngwa na nnukwu carbohydrate na nri protein dị elu nke na-enweghị abụba nke anụ ahụ ga-eme ka ahụ banye na steeti ebe a na-enweta ike niile na abụba abụba na-esighi ike ime. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke calorie si nri bụ ọbụna ubé nke ukwuu ma na-ere ọkụ na-adaghị adaba, nsonaazụ bụ uru bara uru.
Amatara m Dr. Achịcha na-eri nri. Ọ bụ ezigbo esemokwu ma kwuo okwu, ma echiche bụ isi zuru okè. Na ya, ọtụtụ nde mmadụ buru oke ibu n'ụwa nile eruola ogo. A na-ebu ahụ ahụ site na nri n'ime ala ebe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ike niile sitere na abụba. Anụ ahụ na-ere ọkụ na-aga n'ihu, ụda ọnwụ ya dịkwa ngwa karịa ngwa ngwa. Usoro ahụ na-agbaze abụba mgbe niile mgbe ị na-achọpụta na oke abụba na protein dị na nri ahụ zuru ezu. Ke adianade do, ọ na-eme ka o doo anya na ị na-enweta nri zuru ezu, nke ahụ na-eme ka glucose pụta.
M malitere nri nri Atkins, ihe ndị si na ya pụta bụ ihe ịtụnanya. N'ime ọnwa ole na ole, ana m ekpochapụ abụba na-aba ụba nke jupụtara na ya. Etufuru m ihe karịrị kilogram 33. Tụkwasị na nke a, ewepụrụ m ihu ọkụ na ihu m nke m chere na ọ bụ n'ihi respirator nke m na-eji n'ọrụ m. Na oge ahụ, amalitekwara m ịmalite ọrụ mbụ m, ma achọpụtara m mmetụta ha na-arụ n'ime mgbidi ahụ.
Ụzọ Makia Nwere Mmalite Mbụ
Ndi oru mgbasaozi nile gbaghotara afo ole na ole gara aga banyere ihe ize ndụ nke nri nri Atkins n'ihi na ya na i na-eri anu ezi, butter, na àkwá. Ọtụtụ ndị malitere "Onkins Diet" na-adabere na obere obere ihe ọmụma, na ya pụta na ụlọ ahịa na-esi na butter. Enweghị ezigbo ntọala ihe ọmụma, ihe oriri ketogenic adịghị eme nke ọma, ihe ndị na-esi na ya pụta bụ ihe ọjọọ ma ọ bụ ọdachi. Ihe oriri Atkins bụ ketogenic, ma ọ bụrụ na a gbasoro ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, ị na-eri ọtụtụ akwụkwọ nri, protein buru oke ibu na ezigbo oke abụba.
Otú ọ dị, ya na nri nri ketogenic nke Method Makia ị nwere ike iri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nri ọ bụla ọzọ, ma e wezụga ihe ndị dị mfe carbohydrates. Ọnụ ego akwụkwọ nri na-abụ kwa ọkara otu efere, ya mere òkè ha dị elu karịa nri nkịtị.
Kemgbe ọtụtụ afọ, emerela m ahụmahụ iji meziwanye nri ndị na-eri ketogenic. N'ihi oru m, enwere m ohere iji nweta ọbara m. Ụzọ Makia Reboot bụ usoro kachasị ọhụrụ nke mmemme mmefu nke ketogenic. Ọ sitere na usoro Atkins, ma ọ nwere nnukwu mmụba nke na-eme ka abụba na-ere ọkụ ọbụna dị irè karị.
Usoro Makia Reboot bụ, ya mere, ihe oriri na-adịru nwa oge nke ị nwere ike ịkwụsị ibu arọ. Ka ị na-eru nso ibu dị arọ, ị ga-aga na usoro Makia Basic Diet nke kachasị mma maka ezinụlọ dum.
Nsogbu dị iche iche na ọtụtụ ihe ndị na-akpata ọnwụ na-emekarị n'eziokwu bụ na onye ọ bụla n'ime ezinụlọ kwesịrị ịkwadebe ma tụọ nri ha. Ụzọ edozi nri nri Makia ka ezinụlọ nile wee rie otu nri ahụ. Ọ bụrụ na onye òtù ezinụlọ na-agba mbọ ịba na steeti ketogenic, ọ na-ahapụ otu akụkụ carbohydrate dị iche. Ma ọ bụghị ya, nri ahụ bụ otu maka onye ọ bụla.
Afọ ikpeazụ m nọ na-emepe ngwa ngwa Makia Method. Ruo ọtụtụ afọ, agbasoro m ụzọ yiri ya dị ka ihe oriri Mkpụrụ Method Makia, ma na mmalite nke nnukwu ọrụ a, eji m ụma gbakwunye obere carbohydrates ndị dị ka buns, nri dị ọcha, potato, sweets, m hapụkwara mmanụ. Otú ọ dị, uru dị arọ m nwetara bụ nke si na 183 pound ruo 208. 6 pound n'ime otu afọ. Nzube m bụ iji nwalee ihe oriri na-edozi ahụ. Mmetụta nke ndị carbohydrates dị mfe dị nnọọ njọ karịa atụmanya, na ịchịkwa ego ha siri ike. Ihe si na ya pụta bụ ihe siri ike karịa nke m zubere.
01. 01. 2015 M malitere Usoro Makia Reboot. N'ime ọnwa abụọ, arọ m ruru na 176. 4 pound, n'ihi ya, m kachasị ọhụrụ mmemme mmefu dị irè dị irè. A na-atụ egwu 32. 2 pound na ọnwa abụọ! Na-ada ụda dị egwu, mana n'oge ọnwụ, enweghi m ọbụna agụụ oge. Ahụ m na-enweta ike zuru oke ma nwee mmetụta dị mma dịka ọ dị. Emekwara M Ụzọ Makia mgbe niile. N'oge oriri na-edozi ahụ, ndị mmadụ nwere ike imega ahụ.
Ịnweta ihe ọmụma dị mkpa tupu ịmalite usoro Makia Reboot. Ihe ngwugwu ngwangwa na-akọwa ihe niile ị chọrọ ịmalite iji mebie usoro ihe mgbapụta dị njọ. Usoro mmefu nke ihe na-eme ka ọ dị njọ, mgbe e mejupụtara ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị, dị mma ma dị irè. Otú ọ dị, n'enweghị ezi ihe ọmụma na ntinye obi, ịkwesịrị ịmalite.
Ọzọkwa, ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na ịkwesighi ịmalite iri nri na-edozi ahụ ma ọ bụrụ na ị nwere ibu dị arọ. N'ọnọdụ ahụ, ahụ gị na-arụ ọrụ nke ọma, ọ dịghịkwa mkpa ka ị nweta Usoro Makia Reboot, ma ọ bụ naanị nri dị oke iji gbochie ọchịchọ maka sweets ma belata agụụ nke agụụ.
N'ikpeazụ, m ga-ekwu otu n'ime ndị ikom maara ihe n'oge niile, ndị okwu ha bụ ụkpụrụ nduzi m n'ịkwadebe ozi a.
"Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkọwa okwu ahụ n'ụzọ doro anya, ị maghị ihe gbasara ya. "
J. A Source . Onye na-achọ enyemaka, onye guzobere Ụzọ Makia